Safal Khabar - को हुन्, स्मृति इरानी ? जसले राहुल गान्धीको गढमा जितिन्
शुक्रबार, १० जेठ २०७६, ०९ : ०३
एजेन्सी । भारतको लोकसभा चुनाबमा काग्रेस आईले अपेक्षित परिणाममा जित निकाल्न त सकेन – सकेन, पार्टी अध्यक्ष राहुल गान्धीले बर्षौ देखिको आफ्नै परिवारको वर्चश्वमा रहेको अभेद्य किल्ला अमेठी समेत जोगाउन सकेनन् ।
दुई निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाब लडेका राहुलले आफनै परिवारको विरासत रहेको र आफुले पनि तिन पटक जितिसकेको निर्वाचन क्षेत्र गुमाउन पुगे । राहुल अगाडी उक्त क्षेत्रमा उनकै आमा सोनिया गान्धीले जितेकी थिइन् । गान्धी परिवारको अभेद्य किल्ला अमेठीमा यसपटक स्मृति इरानीले भारतीय जनता पार्टीको झण्डा गाढिदिइन् ।
अर्थात स्मृति इरानीले त्यो क्षेत्रमा आफनो जित निकालिन् । राहुललाई हराउने स्मृति इरानी आखिरमा को हुन् ? अहिले सञ्चारमाध्यमहरुले निकै चासको साथ समाचारहरु प्रकाशित गर्न थालेका छन् ।
उनले पहिलो प्रयासमै उक्त क्षेत्रको चुनाव जितेकी भने होइनन् । दोश्रो पटकमा उनले राहुललाई हराएका हुन् । निर्वाचनअघि स्मृति इरानीले अमेठीको एक ठाउँमा आगलागी भएको बेला त्यसलाई निभाउन कार्यकर्ताहरूलाई दिएको आदेश, पानीका लागि आफैँ धारा चलाइरहेको र अवधीभाषी वृद्धाहरूलाई सम्झाइरहेको दृश्य राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूमा प्रसारित भएका थिए ।
त्यसबाट यसपालि उनले सन् २०१४ को तुलनामा अमेठीमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने आकलन शुरुमै गरिएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए पनि राहुल गान्धीलाई हराइदिन्छिन् भनेर चाहिँ कमैले ठानेका थिए ।
इरानी भारतमा नरेन्द्र मोदी सरकारकी मन्त्री हुन् । सन् २०१४ मा बनेको नरेन्द्र मोदीको सरकारमा पहिले मानव संसाधनमन्त्री भएकी उनी पछि सूचना प्रसारणमन्त्री र त्यसपछि कपडामन्त्री भइन् ।
मानव संसाधनमन्त्री हुँदा आफ्नो शैक्षिक योग्यताबारे उनले गरेको टिप्पणी निकै विवादस्पद भयो । तर पनि उनी मोदी मन्त्रिमण्डलमा सुषमा स्वराज तथा निर्मला सीतारमणका साथ एक प्रभावशाली महिला मन्त्री बनिरहिन् ।
उनी कलाकार पनि हुन् । भारतीय टेलि सिरियल ‘क्योँकि सास भी कभी बहु थी’ मार्फत् उनी घरघरमा चिनिएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनी सन् २००३ मा भाजपामा सामेल भई सक्रिय राजनीतिमा आएकी थिइन् । तर कमै मानिसलाई थाहा होला कि उनले कुनै बेला नरेन्द्र मोदीविरुद्ध समेत अनशन बस्न आह्वान गरेकी थिइन् ।
तर पछि पार्टीको उच्च नेतृत्वले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि उनले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिइन् । पछि उनै इरानी सने २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा पराजित भएपनि मोदीको सरकारका मन्त्री वनेकी थिइन ।
बेलायतको अक्सफोर्डस्थित ब्लेनहेम प्यालेसमा रहेको सुनको ट्वाइलेट चोरी भएको छ । ...
शनिबार बिहान सबेरै साउदी अरबका दुई मुख्य...
अन्तर जातीय हिंसा बढ्दै गएपछि मालीमा ३९ लाखलाई मानवीय सहयोगको आवश्यता : राष्ट्रसंघ
अन्तर जातीय हिंसा बढ्दै गएपछि मालीमा ३९...
अमेरिकाले सुगन्धित ई–चुरोट (विद्युतीय चुरोट) को सेवनबाट...